के हो धर्म संस्कृति भन्ने कुरा रामरी बुझौ ?
डिसेम्बर 7, 2018 डिसेम्बर 8, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, धर्म, संस्कृति
आध्यात्मिक शक्तिहरूमा विश्वास गर्नु धर्म हो । ’ धर्म विश्वास गर्ने एक व्यवस्था हो । धर्मद्वारा सामाजिक एकीकरण हुन्छ । ‘हामी’ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । धर्मले व्यक्तिलाई आपत्+विपत्मा धैर्य धारण गरी कार्य गर्ने, साहसपूर्वक सङ्कटको सामना गर्ने, असल काम गर्ने प्रेरणा प्रदान गरी सहयोग गर्छ ।
धर्मले पवित्र र अपवित्रमा फरक बुझाउने कार्य गर्छ । पवित्रता, स्वच्छता र शुद्धता नै धर्म हो । पाप पुण्यको विश्लेषण गरेर पापयुक्त (नराम्रो कार्य) कार्य नगर्न सचेत गर्छ । यसले कुबाटोमा लाग्न निषेध गर्छ । निराशा, उदासिनता र अविश्वासका कारण मानिस असामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन थाल्छ । अतः धर्मले सचेतना प्रदान गर्ने ठूलो कार्य गरिरहेको हुन्छ ।
विश्वमा धेरै थरीका धर्म छन् । खास गरेर हिन्दु, बौद्ध, जैन धर्म प्रचलित छन् भने अरबी देशमा इस्लाम र पश्चिमा जगतमा इसाई धर्म बढी प्रचलित छन् । हाम्रो धर्म सनातन हिन्दु धर्म हो । पहिलेका मानिसहरू तप, ज्ञान, यज्ञ र दानलाई धर्म मान्दै ‘अहिंसा परमो धर्मः’ मा विश्वास गर्दथे ।
जहाँ धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य र आक्रोशलाई धर्मको लक्षण मान्ने गर्दथे । धर्मको अर्थ– आत्मानुभूति हो, कोरा बहस गर्नु, दलिल दिनु धर्म होइन । आमा, बुबा, गुरु र अतिथिलाई जिउँदै देऊताका रूपमा पूजा गर्ने, सम्मान गर्ने हाम्रो चलन थियो आज लोपोन्मुख हुदैछ ।
← के हो क्यान्सर ? यसको उपचार कसरी गर्ने ?
कम्मर दुख्दा गर्नुपर्ने योग आसनहरू →
जुलाई 31, 2018 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक 5
मार्च 22, 2019 मार्च 22, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0